गोपिनीका हिरो श्रीकृष्ण पनि ब्रह्मचारी !
प्रेममान डंगोल द्वापर युगमा बच्चैदेखि विभिन्न किसिमका रोमाञ्चकारी लीला गर्दै आइरहेका कृष्णलाई गोपिनीहरुका हिरोको रुपमा मानेको देखिन्छ । कालो वर्णको भएकोले कृष्णलाई काले कृष्ण पनि भन्ने गरिन्छ । कृष्ण कालो
स्वास्थ्यकर्मीहरुको गिर्दो मनोबल
नगेन्द्रराज पौडेल यति बेला हाम्रो मुलुक कोरोना कहरबाट नराम्रोसँग थिलथिलो भएको छ । यहाँ ५६ हजारभन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमित देखिएको छ भने यसैका कारण ३७० जनाभन्दा बढीको मृत्यु नै
नेपालका सरकारी संस्थानहरुको दुर्भाग्य
रमेशकेशरी वैद्य कुनै समय नेपालका प्रायः सरकारी संस्थानहरुको अवस्था निकै खराब थियो । जसले गर्दा मानिस बिरामी भएर पनि चलिरहेसरह संस्थानहरु चलिरहन्थे । यस्ता सरकारी संस्थानहरुको नाम अंकित गर्नुपर्दा नेपाल
दलीय कुचक्रमा महिला समावेशिता
राममाया लामिछाने संविधानसभाद्वारा जारी, जनआन्दोलन २ पछि प्राप्त संविधानमा नेपालका तत्कालीन समयका २६ वटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालको संविधानले कल्याणकारी राजनीतिक शासन प्राणाली, कानुनको शासन, मानवको
सिन्धुपाल्चोकले पछिल्लो दुई महिनामा निरन्तरका ठूला ठूला बिपतिको सामना गरिरहेको छ । बाह्रबिसेको जम्बु बाढी, भोटेकोसीको बुलकोटे पहिरो, जुगलको लिदी पहिरो हुँदै दुई दिन अघि बाह्रबिसेको घुम्थाङ पहिरोसम्म आइपुग्दा १
महिलाको पहिचान पुरुषको शान
डा. रेणु अधिकारी हरेक व्यक्तिको जीवनमा पहिचानले महत्वपूर्ण स्थान राख्छ । उसको पहिचान के–कस्तो छ, त्यसले उसको आत्मविश्वासलाई प्रभावित गर्दछ भने उसको आत्मविश्वासले उसको पहिचानलाई । यी दुई एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित
‘माझीले नै डुंगा डुबाउन लागेपछि…’
बद्री तिवारी सार्वजनिक पदधारण गरी प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नितान्त निजी तथा गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न, नाजायज फाइदाका लागि पेसागत आचारसंहिताको चरम उल्लंघन गर्ने पदाधिकारीहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म देशमा सुशासनको
बालकृष्ण मैनाली आजसम्म पनि विश्व स्तब्ध नै छ । प्रत्येक मानव अचम्म तरिकाले त्रसित हुन पुगेका छन् । त्रसित हुनु स्वाभाविक पनि हो । हुन त विश्व महामारीको उदाहरण यो
कृष्णहरि बास्कोटा मेरा पिताश्री हरिहर बास्कोटा ९४ वर्ष पूरा गरी ९५ वर्षमा प्रवेश गर्ने क्षणमा हुनुहुन्छ । यसै सन्दर्भमा बुबाको पढाइ र जागिरका बारेमा कुराकानी गर्दा रोमाञ्चकारी स्मरणहरु हाम्रा सामु
मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्यको योग्यता
दामोदर पौडेल अहिले कस्ता मानिस मन्त्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेबारे बहस नै चलेको छ । वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुने हल्ला चलेदखि नै
अर्चना शर्मा केही अपबाद छाडेर हेर्ने हो भने हरेक अपराधको पछाडी एउटा कथा लुकेको हुन्छ । जुन अत्यन्तै पिडादायी हुन्छ। समाजशास्त्रको बिध्यार्थी र पछि सामाजिक कार्यकर्ता भएको नाताले धेरै सामाजिक
दिनेश घिमिरे नाटक मञ्चन गर्न आएका पात्रका रुपझैँ हौं हामी यस धर्तीमा । समय, परिस्थिति, सम्बन्धका आधारमा भूमिका खेलिरहेका हुन्छौं । कुनै कुराले दुःख अनि त्यही कुराले सुख, यही गोलचक्करमा
जीवनको वास्तविक आनन्द के हो !
प्रेम रावत यो संसारमा बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । तथापि, सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने जति पनि कुराहरू हामी सुन्छौँ अनि बुझ्छौँ– तिनलाई हामी व्यवहारमा पनि ल्याउन
हरेक व्यक्तिको जीवनमा पहिचानले महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ । उसको पहिचान के र कस्तो छ त्यसले उसको आत्मविश्वासलाई प्रभावित गर्दछ भने उसको आत्मविश्वासले उसको पहिचानलाई । यी दुई एक–अर्कामा अन्तर सम्बन्धित
सदाचारी बन्नुपर्ने प्रमको सन्देश ?
केशव अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेगत सोमबार १७ औँ निजामती कर्मचारी दिवसको अवसरमा निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै केही सन्देश व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीले आफ्ना असल आचरणमा
पेशल आचार्य ‘सन्चै हुनुहुन्छ ?’ कति सरल छ यो वाक्य तर यसको अन्तर्यमा गएर एकछिन् गम्भीर भएर सोचौं त । पूरै जीवन नै यसैमा छ । हो, जीवनमा सबैभन्दा ठूलो
विमलादेवी ढकाल कुनै पनि राष्ट्रको मूल नीति भनेको राष्ट्रिय नीति नै हो । यसमा दुईमत हुने कुरा नै भएन । राजनीतिले नै सम्बन्धित राष्ट्रभित्र रहेका थरी–थरीका भाषा, धर्म, जात, वर्ण,
महामारीभन्दा तनावले पारेको गम्भीर असर
टंक पन्त कोरोना परीक्षण गराएको तीन दिनपछि रिपोर्ट रेडी भएको म्यासेज मेरो मोबाइलमा आउनासाथ मेरो हात नै काम्यो । लामो सास फेर्दै मोबाइलको म्यासेज खोलेर युजर आइडी र पासवर्ड हाल्न
मानव बेचबिखन विद्यमान समाजको चुनौतीपूर्ण र गम्भीर सामाजिक मुद्दा हो । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा हुने प्रमुख तीन अवैध कारोबारहरुमा मानव बेचबिखन पनि एक रहेको छ । आईएलओ र वाक फ्री फाउन्डेसनले सन्
चिरञ्जीवी मास्के कम्युनिस्टले धर्म मान्दैनन् भनेर अफवाह फैलाउन लागेको धेरै शताब्दी भैसकेको छ । माक्र्सको उदय र उनैको ‘धर्म अफिम हो’ भन्ने भनाइलाई डेमोक्रेटहरुले बुलन्दीमा पु¥याएको समय शताब्दीमै हिसाब गर्नुपर्छ